Nic VPN Beta Apk Dhawunirodha Ye Android [App] - Luso Gamer
Nic VPN Beta Apk Dhawunirodha Ye Android [App]
Kunyangwe isu takatoburitsa akawanda akasiyana Virtual Private Network maturusi pamusoro apa. Asi panguva ino tadzoka nechimwe chinhu chakakosha uye chakasiyana. Ehe, isu tiri kutaura nezve hapana imwe inoshamisa Nic VPN Beta.
Pfungwa yezvishandiso zvakafanana yaionekwa sechinyakare uye akadaro akavanzika network akakurumbira kubva '90s. Nyika yeInternet yakatounza mikana yakawanda yakasiyana kuvanhu. Kuti uwane uye uwane data nekukurumidza pasina kutambisa nguva.
Kunyangwe vanhu vanogona kutumira uye kugamuchira zvinyorwa zvakakosha online mahara. Asi kana zvasvika kune chengetedzo nezvekutumira data saka zvakaoma chaizvo kuvimbisa. Ipapo vanogadzira vakauya neiyi mhinduro yakakwana yekuti vanhu vaite kuti hukama hwavo huve hwakachengeteka.
Chii chinonzi Nic VPN Beta Apk
Nic VPN Beta Android chishandiso chepamhepo nhare chakagadzirwa chakatarisana nevashandisi ve smartphone. Chinangwa chekugadzira chishandiso chitsva ichi ndechekupa imwe online imwe chikuva. Iko vashandisi havazomboda kutenga chero kunyoreswa.
Nyika yave musha wepasi rose nekuda kwekubatana kweinternet. Kunyangwe vanhu vanofarira kutaura uye vanogamuchira akasiyana magwaro akakosha vachishandisa internet. Nekuti maitiro acho anoonekwa nekukurumidza uye haambotambisi nguva.
Nekudaro, ma hackers epamhepo uye mamwe matambudziko ekuba data akatoitika. Zvakare, vanhu vakatorasikirwa nedata nekuda kwekushaikwa kwekuchengetedza maprotocol. Patinoongorora online chengetedzo system nemachaneli, takabva tawana masarairi ekuchengetedza akadai achidhura.
Izvi zvinoreva kuti vashandisi vanoda kubhadhara mari kuti vawane chiteshi chakachengeteka. Nekudaro nhasi pano taunza ichi chinoshamisa chechitatu bato chishandiso. Izvo zvine mukurumbira nekuda kwekuchengetedza kwayo encryption uye maprotocol. Saka iwe unofarira mu VPN chishandiso wobva warodha Apk kubva pano.
zita Nic VPN Beta
zera 14.28 MB
Package Zita com.nicadevelop.nicavpn
Inodiwa Android 4.4 uye Uyezve
Kunze kwekupa chiteshi chakachengeteka, chishandiso chinobatsirawo kuvhura zvakavharika zvemukati. Ehe, iyo internet nyika inoonekwa seyakashandiswa nemasangano ehurumende. Kunyangwe masangano akadaro anogona kuisa kurambidzwa zvachose pamusoro pezvinyorwa nguva nenguva.
Chikonzero chekurambidza mapuratifomu akadaro anogona kusiyana nyika nenyika. Kunyangwe zvisingaite kuti nyanzvi dzibvise mabhuroki uye kubvumira zvirimo. Naizvozvo tichitarisa rubatsiro rwemushandisi, nyanzvi dzinozodzoka nekuwanikwa kweVPN.
Ikozvino kuisa ichi chinhu chimwe chete mukati me smartphone kuchabatsira kuvhura zvese zvakavharika zvemukati ipapo. Uyezve, inogona kubatsirawo mukupa kuchengetedza maprotocol. Nekuda kwekuwedzera kwekuchengetedza mapuroteni, ikozvino data inotamiswa kuburikidza nekushandisa haionekwe.
Rangarira vanogadzira vanodyara aya akawanda maseva ekubatanidza mukati. Izvi zvinongedzo zvinochinjika kubva kuhombe dashboard. Nekudaro, iwe unofarira kuwana VIP yekubatanidza kana uplink. Ipapo iwe unogona zvakare kuita izvo kubva mukati mekushandisa.
Vagadziri vacho vari kuronga kuwedzera dzimwe sarudzo nyowani mukati. Uye izvo zvitsva zvimiro zvinogona kuwanikwa mumazuva anouya kune vashandisi. Saka iwe wakazvipira kuongorora idzo sarudzo wobva waisa yazvino vhezheni yeNic VPN Beta Dhawunirodha mukati me smartphone.
Kuisa iyo app kunopa zvisingaperi maficha.
Izvo zvinosanganisira nyika dzakasiyana IP server kubatana.
Zvese zvemahara uye premium server zvinongedzo zvinosvikika.
Push ziviso yekuyeuchidza ichaita kuti mushandisi ave wazvino.
Maitiro ekurodha Nic VPN Beta App
Parizvino application haigone kuwanikwa kubva kuPlay Store. Saka mumamiriro ezvinhu akadaro tinokurudzira avo vashandisi venhare kuti vashanyire webhusaiti yedu. Nekuti pano pawebhusaiti yedu tinongopa echokwadi uye epakutanga maApk mafaera emahara.
Kuita chokwadi chekuti vashandisi vanovaraidzwa nechigadzirwa chakakodzera. Isu takatoisa iyo Apk pane akasiyana mafoni. Mushure mekuisa iyo application, takawana iyo Apk yakachengeteka uye yakatsetseka kuisa nekushandisa.
Kusvika parizvino akawanda ezvimwe zvakafanana VPN Zvishandiso zvakaburitswa pane yedu webhusaiti. Kuisa iwo akanakisa mamwe maturusi ndapota tevera maApk mafaera. Zviri DHOOM VPN PRO Apk uye Zvakanaka VPN Apk.
Uyu ndiwo mukana wakanakisa wevashandisi veAndroid kuita kuti yavo internet surfing ive yakachengeteka. Kunyangwe vashandisi vanogona zvakare kuwana zvisingaperi zvakavharwa zvemukati pasina mvumo. Saka wagadzirira kuisa iyo Nic VPN Beta Apk wobva waidhawunirodha kubva pano nekudzvanya kumwe chete.
Categories Tools, Apps Tags Nic VPN Beta, Nic VPN Beta Apk, Nic VPN Beta App, Nic VPN Beta Dhawunirodha, VPN Post navigation
LuLuBoxPro Apk Dhawunirodha Ye Android [Ichangoburwa App]
Ninja TV Apk 2022 Dhawunirodha Ye Android [LIVE IPL]